I-HTC ayiphakamisi intloko kwaye iyaqhubeka nokuwa kwingeniso | Iindaba zeGajethi
Akukho zindaba zimnandi kubaphathi be-HTC kuba sijamelene nokuhla kwengeniso ephindaphindwe inyanga nenyanga kwaye ayivumeli amaTaiwan ukuba aphakamise intloko. Kule meko sijamelene nengeniso kwinyanga ephelileyo ka-Epreli ye-9,3% xa kuthelekiswa kwinyanga enye yonyaka ophelileyo kwaye ekugqibeleni yintoni esenza ukuba sibone ukuba abanako ukusombulula iingxaki zabo. Ngeli xesha inkampani irekhode ilahleko ezibhiliyoni ezi-2.400, Oko kwathetha ukuba kuvakala kakhulu kodwa kungaphantsi kunoko baphulukene nako kunyaka ophelileyo xa bafikelela kumgangatho ongokwembali apho bafikelela kwilahleko ezizigidi ezingama-3.600.
Nokuba kunganjani na, ifemi ayinakho ukoyisa kwaye oku kungaphela kubi kakhulu kulo nyaka ngaphandle kokuveliswa kwezixhobo zikaGoogle (nangona utyikityo olubonakalayo lwaseTaiwan lungabonakali kuzo) kwaye ukuba sijonga umvuzo ofunyenwe ngexesha kwiinyanga ezine zokuqala zalo nyaka, inani liphuma laya kwizigidi ezingama-19.240 zeerandi zaseTaiwan eye yehla nge-6,45% xa kuthelekiswa nelo xesha linye lonyaka ongaphambili.
Ngokubanzi, asinakuthi inkampani ayithathi manyathelo okunciphisa ilahleko zayo okanye ukuzama ukoyisa kwimarike eyinkimbinkimbi, kodwa umngxunya apho ubambeke khona ubonakala unzulu kakhulu kwaye nokuba basika kangakanani kwiiofisi -nje eSpain- okanye kwi-R & D, njl., kubonakala ngathi akunakubuyela umva. Ngokubhekisele kwizixhobo zefowuni zeHTC sifumana izinto ezintsha ezinikezwe ukuphela konyaka ophelileyo nasekuqaleni kwale nto, njengeHTC U Ultra okanye iHTC U Play, kodwa kubonakala ngathi ayonelanga ukubaleka. Kungekudala bazokwazisa i-HTC U 11 entsha, isixhobo esinokunceda ukwandisa ingeniso kodwa esingakholelwa ukuba sisisombululo sokuphinda sibuyele kwisinki.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » I-HTC ayiphakamisi intloko kwaye iyaqhubeka nokuwa kwingeniso
IGearBest isinika isixa esikhulu sezinto ezinokungaphoswa